Rohingya Genocide Survivors’ 10 Demands – Haikal Mansor
The ten demands are based on the letter sent to Myanmar’s State-counsellor Aung San Suu Kyi by Rohingya Genocide Survivors from refugee camps in Bangladesh on October 31, 2018.
1) Our ethnic identity “Rohingya” must be recognised as an official ethnic group as before 1970s.
2) Our return to our homeland in Rakhine State must be protected by international observers.
3) International protection must be placed in our homeland before we return.
4) Our houses in original villages must be rebuilt before we return.
5) We seek compensation and reparations for lives lost, injuries inflicted and harm caused. We seek compensation and reparations for the properties we lost and we demand the return of confiscated lands since 1992.
6) All Rohingya prisoners in various prisons must be released.
7) All internally displaced persons in Sittwe and other towns must be able to return to their original places and homes.
Appropriate compensation and reparations must be given and, not least, their full citizenship must be restored before we agree to return to our homeland.
8) Innocent Rohingya must be removed from the terrorist list arbitrarily made by Myanmar authorities.
9) Full citizenship of Rohingya must be restored and all restrictions must be lifted.
10) Issuing National Verification Card must be stopped, and this system must be abolished.
လူမျိုးတုံးသတ်​ဖြတ်​မှုမှ လွတ်​​မြောက်​ကျန်​ရစ်​သူ ရိုဟင်​ဂျာများနှင့်​ သူတို့၏ ​တောင်းဆိုချက်​များ
(၁) ဌာနေတိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာများကို ၁၉၇၀ပြည့်နှစ်များမတိုင်ခင်ကတည်းက တရားဝင်ရှိခဲ့သော ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအဖြစ် လက်ခံရမည်။
(၂) ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတိမြေရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ပြန်လည်လာရောက်သည့်အခါ နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ အစောင့်အရှောက်ဖြင့်သာ ဖြစ်ရမည်။
(၃) ကျွန်ုပ်တို့ မပြန်ခင်အလျင် ဇာတိမြေတွင် နိုင်ငံတကာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ စီစဉ်ထားရမည်။
(၄) ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ခဲ့သည့် မူရင်းရွာများသည် ကျွန်ုပ်တို့မပြန်ခင် ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပြီးဖြစ်ရမည်။
(၅) ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအသက်များ၊ ရရှိခဲ့ဒဏ်ရာများနှင့် ခံစားခဲ့ရသောထိခိုက်နစ်နာမှုများအတွက် နစ်နာကြေးရရှိလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအဆောက်အုံများအတွက် နစ်နာကြေးနှင့် အစားလျော်ကြေးများရရှိလိုသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ သိမ်းယူထားသော မြေများကို ပြန်လည်ရရှိလိုသည်။
(၆) ထောင်အသီးသီးတွင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသော ရိုဟင်ဂျာအကျဉ်းသားအားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးရမည်။
(၇) စစ်တွေမြို့နှင့် တခြားမြို့များရှိ နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူများသည် မိမိမူရင်းနေရာနှင့် အိမ်များကို ပြန်လည်သွားရောက်နေထိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဇာတိမြေသို့ ပြန်မလာခင်အလျင် ထိုက်သင့်သော လျော်ကြွေးငွေနှင့် အစားလျော်ကြေးများ၊ ပြည့်ဝသောနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများကို လျော့နည်းခြင်းမရှိဘဲ ပြန်လည်ပေးရမည်။
(၈) အပြစ်မဲ့ရိုဟင်ဂျာများကို မြန်မာအာဏာပိုင်များထင်ရာမြင်ရာ သွတ်သွင်းသတ်မှတ်ထားသော အကြမ်းဖက်သမားစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးရမည်။
(၉) ရိုဟင်ဂျာများကို နိုင်ငံသားအပြည့်အဝပေးရမည်။ ပိတ်ဆို့ ကန့်သတ်ချက်များအားလုံးကို ပယ်ဖျက်ပေးရမည်။
(၁၀) NVC သက်သေခံကတ်ပြားများ ထုတ်ပေးနေမှုကို ရပ်တန့်ပြီး ထိုစနစ်ကို အပြီးပယ်ဖျက်ပေးရမည်။